RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Manchester United guusha ka gaartay Burnley ee Premier League – Gool FM
(Manchester) 24 Abriil 2017 – Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa 2-0 ku garaacday shalay gelinkii dambe naadiga Burnley kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Labada gool ee ay Man United ku adkaatay kulankii ka dhacday garoonka Turf Moor, waxaa qeybtii hore ee ciyaarta u kala dhaliyey Anthony Martial iyo kabtan Wayne Rooney.
>- Anthony Martial ayaa gool dhaliyey mid kalena caawiyey kulan Premier League ah oo ay kooxdiisu marti tahay ama ku ciyaarayso meel ka baxsan garoonkeeda markii ugu horreysay xirfaddiisa ciyaareed.
>- Kaliya Alan Shearer (190) ayaa dhaliyey goolal kala duwan Premier League oo ka badan Wayne Rooney oo dhaliyey 149 gool lana sintay Frank Lampard & Andrew Cole.
>- Ander Herrera ayaa lix gool caawin ka sameeyey horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, waana in ka badan marka la isku daro inta caawin uu sameeyey labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay.
>- Goolhayaha Manchester United ee David De Gea ayaa shabaqiisa oo nadiif ah garoonka ka baxay kulankan, waxaana ay taasi ka dhigan tahay inuu 100 kulan gool ka ilaashaday shabaqiisa Premier League.
>- Man Utd ayaa hadda gacanta ku haysata rikoorkii ugu dheeraa ee guuldarro la’aan ah shanta horyaal ee ugu waa wayn Yurub, waxaana dhinaceeda dhulka la dhigin 23 kulan oo xiriir ah Premier League.
>- Mudadaas Man United ay guuldarro la’aanta tahay waxa ay gashay 10 barbaro, halka 13 kulan ay guul gaartay, waxa ay dhalisay 37 gool, waxaana laga dhaliyey 12 gool, iyadoo 10 kulan shabaqeeda oo nadiif ah garoonka ka baxday.
>- Man United ayaan hadda laga adkaan oo unbeaten ah 23 kulan oo xiriir ah Premier League 10 kulan barbaro ayey gashay, halka 13 kulan ay guul gaartay, waana rikoorkeedii guuldarro la’aan ee ugu dheeraa oo ay samayso hal xilli ciyaareed tan iyo xilli ciyaareedkii 2010/11 oo Man Utd aan laga badin 24 kulan oo xiriir ah horyaalka.
>- Anthony Martial ayaa dhaliyey 25 gool tartammada oo dhan tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Man United, waxaana goolka uu shalay dhaliyey uu ku miiqo yahay €10m, Man United ayaana siin doonta lacagtaas kooxda Monaco oo ay ka soo iibsatay xiddigan maadaama ay heshiiska qeyb uga dhigeen haddii uu dhaliyo 25 gool in la siiyo lacag dhan €10m.
>- Kabtan Wayne Rooney ayaa ku dhaliyey 2 gool afartiisii shuut ee ugu dambeeyay ee bartilmaameedka ahayd oo uu ka sameeyey horyaalka Premier League.
Ma aragtay sida waalida ahayd uu xalay u dabaal degay Neymar....(Halkuu ka daawanayay El Calsico?)